Suuran kun erga yaala argatanii nyaachuus eegalan booda kan kaafame. | Kichuu
Posted on March 19, 2021 by kichuu_admin
Sana dura maal akka fakkaachuu danda’an tilmaamuun salphaadha. Saba isaaniitiif jecha gatii kana hunda kaffalaa jiru. Mana hidhaa keessattis warra qabsoo itti fufe. Oromoon akka isaanii kanatti cichee qabsoo itti fufnaan yeroo gabaabduu keessatti mirga isaa kabachiisee akka saba guddaatti kabajaa isaan male kabajama.
Biyya barbaadan keessa qananiidhaan jiraachu osoo danda’anii Uummata isaanii waliin beela’uu fi rakkachuu filatan. Seenan isiin hin dagatu!
40 Days Starving For Justice !
Barruu Saliha Sami Dalikana ilaalee waan hedduu dubbatuuf jedheen Afaankootti haahafu jedheenfhiise. Gaafin irraa dubbadhummoo nijira.
Suuraan hidhamtoota siyaasaa Oromoo miliqee ba’e mata duree miidiyaa Hawaasummaa ta’ee jira.
Suuraan hidhamtoota siyaasaa Oromoo halkan 40f lagannaa nyaataa geggeessanii, sababa lagannaa nyaataa kanaatiin qaamni isaanii hedduu laaffatee, huuqqatanii bifti isaanii kan duraaniirraa guutummaatti jijjiiramuu agarsiisu, guyyaa har’aa miidiyaa Hawaasummaarratti qoodamaa jira.
Suuraan Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Jawaar Mohammad fi Obbo Haamzaa Booranaa mullisu kun, qaamaan hedduu huuqqachuu hidhamtoota siyaasaa kanatti dabalata, lagannaa nyaataatiin hedduu miidhamuufi laaffachuu isaaniif agarsiiftuudha jedhamuun namoonni garaagaraa marsaa Hawaasummaa irratti qoodanii jiru.
Suuraan Hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa guyyaa 40f geggeessan mullisu kun erga miidiyaa Hawaasummaa irratti qoodamee, miidhamuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanaaf waldhaansarraa ittifamuun hiraarfamaa turuun isaanii akka sababaatti kaasuun, utuu jaarsummaadhaan akka lagannaa dhaaban hin taasifame ta’e, rakkoon dhufuuf ture guddaa ta’uu akka malu namoonni gargaaraa marsaa Hawaasummaa irratti yaada isaanii ibsaa jiru.
Mootummaan yeroo ammaa kana angoo of harkaa qabu, OPDO kaleessaa Bilxiginnaan har’aa!